TogaHerer: WASAARADA QORSHEYNTA OO BEENISAY WAR UU SHEEGAY XOGHAYA ARIMAHA DIBADA EE XISBIGA KULMIYE
WASAARADA QORSHEYNTA OO BEENISAY WAR UU SHEEGAY XOGHAYA ARIMAHA DIBADA EE XISBIGA KULMIYE
“Waraysi Wargayska SAXANSAXO la yeeshay Xoghaya Arrimaha Dibedda ee Kulmiye, maalintii arbacada, 28kii October 2009, wuxuu xoghayahu wareysigaas ku sheegay:
“In taageeraddi dawladaha reer galbeedku ay siinjireen Somaliland dib loo dhigay ilaa doorashooyinka ka dib. Cid imika kula soo deg degaysa Somaliland mucaawinadeeda maamulka imika jirana aanay jirin, iyadoo imika dalku doorasho u diyaar garaoobayo”
Warkaas uu bixiyey Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Kulmiye waa been abuur, sal iyo raadtona lahayn, oo aynay waxba ka jirin sababaha soo socda awgeed.
Kaw: Muu ahayn warkaassu mid rasmi ah oo uu soo xigtay xogo rasmi ah oo la sheegay. Haddu hayo xogahaas waa looga fadhiya inuu warkisaas ku saleeyo.
Laba: Arrimaha uu ka hadlay ee deeqda ku saabsan waxa rasmi ahaan ka wada xajoon kara dawlado sida Xukumadd Somaliland iyo dawlada kale ay khuseyso. Ma aha mid u taala oo cidi kal tashaneyso, rasmi ahaan, Xoghaye xisbi mucaarid ah.
Saddex: Warkaas la sheegay ma ah mid rasmi ahaan u soo gaadhay xukumada oo la hayo, haddii taasi jirina, waa waxkuma ool.
Afar: Deeqaha dawladaha reer galbeeku waxay soo maraan barnaamijka dibudhiska iyo horumarinta Somaliland (2008-20012). Barnaamijkaas oy ansixiyeen deeq bixiyaayaasha iyo xukumadda Somaliland dhamaadkii sanadkii 2007. Wax- iskabedeley barnaamijkaas oo ku saabsan deeqaha ka imanaya dawladaha reer galbeedkana, ilaa hadda, ma jiraan. Sidii loogu talogaleyna wuu u socda. Barnaamijkaas oo ay fulintiisa ay masuul uga tahay xukumadda Wasaaradda Qorshaynta Qaranku.
Waxaa markaas Wasaaradda Qorshaynta Qaranku kula talineysa Xoghayaha
Arrimaha Dibedda ee Kulmiye inuu kawaantoobo ka-dhawaajinta arrimo runta
garab marsan oo laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan.
Alla Mahad Leh,
Maxamuud Xuseen Muuse
Agaasimaha Wasaaradda Qorshaynta Qaranka,
Iskuduwidda iyo Xidhiidhita Ha’yadaha Caalamiga ah
Posted by togaherer at 08:26
Adams Kevin 10 September 2014 at 03:16